Amakhethini e-Thermal Insulated Bedroom , Amakhethini aMnyama aMnyama aMnyama, amakhethini egumbi lokulala eliThermal elifakwe kwiGumbi eliKhuselekileyo eliMfuthu eliMnyama, abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso-Zhejiang Rancho Santa Fe ekhaya textile Co.,Ltd
Inani Model: NTSUNDU
I-FANCY DECORATION & PREMIUN QUANLITY - Ngoyilo olulodwa kunye nomgangatho ophezulu we-pleat, amakhethini amnyama aya kuqaqambisa umhombiso wekhaya kwaye enze umoya ozolileyo kulo naliphi na igumbi. Ilaphu ngokwalo lelinye lawona maxwebhu adumileyo kwihlabathi liphela. Ngenkangeleko entle, inika umoya opholileyo kunye nokhululekile kwigumbi. I-Material yi-100% yepolyester, inokuthintela ukukhanya kwe-85% -93% kunye ne-UV ray.
UKUVIKELA OKUKHANYA & OKUGQIBELELEYO UKUFUMANA KWE-THERMAL –.ziikhethini ezimnyama okanye zimnyama. Ubunzima belaphu busuka kwi-200gsm ukuya kwi-320gsm. Zithambile kwaye ziyathandeka ukuzibamba. Ukongezwa okugqibeleleyo kwigumbi lokulala, igumbi lokuhlala, igumbi labantwana njalo njalo. Izinto ezikhethwe ngumgangatho, azikho iihem ezingalinganiyo, kunye nolawulo olungqongqo lomgangatho wamava angcono emveliso.
Yenziwe ukusuka kwi-100% ye-premium yekhwalithi ye-Super Soft ilaphu (i-Polyester, iNgeniswa ngaphandle). Iikhethini ezimnyama ze-Umi zomelele kwaye zimnandi ukuzibamba. Ilaphu leTekhnoloji ye-Triple Weave Blackout yilaphu elikhanyayo kwaye elihambayo elinomqolo okhethekileyo ofihliweyo ovimba ukukhanya ukuze kuphumle ubuthongo. Ngoko inokuqinisekisa ukuba abantu abayi kuphazanyiswa lihlabathi langaphandle.